Mayelana NATHI - Shenzhen Aopvision Tech Co., Ltd
I-Shenzhen Aopvision Tech Co., Ltd. yasungulwa ngo-2006, igxile ku-R & D, ekukhiqizeni nasekuthengiseni embonini yezokuphepha. Sinikela ngayo yonke imikhiqizo ye-CCTV yamakhasimende emhlabeni wonke, kufaka phakathi i-Smart Face Detections / Face IDH.265 NVR range, i-Smart IP Camera, i-Smart 5 IN 1 XVR, amakhamera we-HD asebenza kahle futhi asebenza kahle, ama-WiFi Cameras nama-WiFi NVR Kits, 4G / Wifi Solar Camera . Njengomunye wabakhiqizi abahamba phambili eChina, i-Aopvision inikelwe ukuhlinzeka ngobuchwepheshe obusezingeni eliphakeme, umkhiqizo wekhwalithi, kanye nensizakalo yobungcweti.
I-Aopvision ineqoqo lamathalenta e-R & D, futhi isebenzise iminyaka eminingi yesipiliyoni embonini yezokuphepha eChina. Ngaphezulu kwalokhu kwenza i-Aopvision ibe yipulatifomu yezobuchwepheshe ephezulu. Inkampani isebenzisa uhlelo lokuphathwa kwamabhizinisi oluthuthukile kanye nohlelo lwesimanje lwe-OA, futhi yakha imodi yokukhiqiza enamafutha amathathu kokukodwa nge-TQC, TPS ne-TPM.
I-Aopvision isebenzisa ngokuqinile ukuphathwa kwe-QC ngokusebenza kahle komsebenzi futhi ibiza futhi. Ngakho-ke, Sithole isitifiketi sekhwalithi yekhwalithi ye-ISO2008 kanye ne-ISO14001 International Environmental Management Certificate; ngaphezu kwalokho, imikhiqizo yethu yochungechunge ivunyelwe ngezitifiketi ze-RoHS, i-CE ne-FCC, enikela ngamakhasimende ikhwalithi nemikhiqizo yokuncintisana kanye nesevisi enhle kakhulu ngemuva kokuthengisa.
Imikhiqizo ye-Aopvision isetshenziswa kabanzi emabhizinisini, ezakhiweni ezihlakaniphile, emahhotela nasezimakethe, nasezindlini zokuhlala njll. Njengamanje, imikhiqizo yethu ibonwe ngempumelelo eMelika, Canada, Japan, Britain, Germany nakwamanye amazwe nezifunda.
I-Aopvision igcizelela embonweni wentuthuko ejwayelekile futhi evumelanayo, futhi izinikela ekwenzeni impilo yabantu ibe nokuthula futhi iphephe emhlabeni wonke.
"Kuphephe ngokwengeziwe, kuhlakaniphe ngokwengeziwe", lokhu kungumsebenzi wethu!
I-Aopvision izoqhubeka nokuxhasa umoya webhizinisi we "Professionalization Dedication Concentration", izogcina ithuthuka, ihlola futhi idala enkundleni yokuqapha ividiyo, ukukhiqiza imikhiqizo esezingeni eliphakeme futhi ebiza kakhulu, futhi idale inani elikhulu lamakhasimende.
Umqondo Wokuphatha: Sihambisana "nemakethe kuqala, ikhasimende kuqala", okugxile ezimakethe kanye nokufunwa kwamakhasimende njengomqondo oyinhloko wokuphathwa.Besisebenza kanzima sihlanganisa umkhiqizo futhi sithuthukisa insizakalo yethu. Besilokhu sinani njalo.
Quality System: Sakha upproduction izikhungo kanye quality izikhungo, ukusungula esiqinile izinga zolawulo. Yonke imikhiqizo ihlolwa ngokuthembekile nokuhlolwa kokuqina kwemvelo ngaphambi kokuthunyelwa. Sisebenzisa ngokuphelele uhlelo lwe-ISO9001: 2015 lokulawulwa kwekhwalithi futhi sathola isitifiketi.
Uhlelo Lwemvelo: Sithole isitifiketi se-ISO14001, ukuqinisekisa ukuthi inkampani ayinayo imiphumela emibi emvelweni.Sitholile isitifiketi se-ROHS, yonke imikhiqizo yethu kanye nezinto zomkhiqizo zenziwa kumazinga we-ROHS.
1-Panasonic kusengaphambili i-NPM SMT Line, isivinini esikhulu, kanye ne-Yamaha SMT LINE
2-Setha Izinga Lokushisa Eliphezulu Lokugeleza Komoya
Ulayini Womhlangano Olayini-3
Ithimba le-4 leqembu le-R & D lomuntu ongu-50
Amandla weNyanga ngayinye: Ama-200K wamaKhamera, ama-30K-50K we-DVR / NVR